Etu esi eji Font Awesome na Illustrator na ngwa ndi ozo | Martech Zone
Nwa m nwoke choro a kaadị azụmahịa maka azụmahịa imepụta DJ na egwu ya (ee, ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta Ph.D. na Math). Iji chekwaa ohere mgbe ị na-egosipụta ọwa mmekọrịta ya niile na kaadị azụmaahịa ya, anyị chọrọ ịnye ndepụta dị ọcha site na iji akara ngosi maka ọrụ ọ bụla. Kama ịzụta logos ọ bụla ma ọ bụ mkpokọta sitere na saịtị foto ngwaahịa, anyị ji ya font Awesome.
Font Awesome na-enye gị scalable vector akara ngosi nke nwere ike n'otu n'otu ahaziri - size, agba, dobe onyinyo, na ihe ọ bụla a ga-eme na ike nke CSS.
Akara edemede na-adabere na ngwa ngwa ma nwee ike ịbelata ọrụ gị, yabụ ha zuru oke maka iji ngwa desktọọpụ eserese dị ka ihe ngosi ma ọ bụ Photoshop. I nwedịrị ike ịgbanwe ha gaa n’ihe ndepụta ma jiri ha mee ihe atụ.
A na-ejikwa font Awesome iji tinye akara ngosi ndị a na akara ngosi ndị ọzọ na weebụsaịtị, mana ị gaghị achọpụta na ị nwere ike ibudata font ahụ n'ezie iji wụnye na Mac ma ọ bụ PC gị! Ezi fontType (faịlụ ttf) bụ akụkụ nke download. Wụnye font, regharịa ihe atụ na ị na-agba ọsọ!
Enweghị mkpa iburu agwa ọ bụla n'isi ma ọ bụ mee nyocha maka nke ziri ezi, lee otu esi eji font:
Meghee Font Egwu Cheatsheet na ihe nchọgharị gị.
Mepee Illustrator ma ọ bụ Photoshop (ma ọ bụ sọftụwia ndị ọzọ).
Nịm font ka font Awesome.
Idetuo na mado agwa si cheatsheet n'ime faịlụ gị.
Nke ahụ niile bụ ya!
Etu esi eji Font Awesome na Illustrator
Nke a bụ vidiyo ngwa ngwa gbasara otu m ga -esi chọta akara ngosi na Font Awesome wee jiri ya mee ihe n'ime faịlụ ihe atụ m.
Etu esi eji Font Awesome na Photoshop, Illustrator, na Desktop Platform Ndị ọzọ.
Nke a bụ nnukwu vidiyo na etu esi eji Font Awesome na Illustrator (ma ọ bụ nyiwe desktọọpụ ndị ọzọ).
Mepụta ihe ederede maka Font gị dị mma
Otu ihe ị kwesịrị iburu n'uche bụ iji zere iji ya na ikpo okwu nke na-adịghị etinye font ma chọọ ka etinye ya na sistemụ ahụ. Iji ya n'ime Okwu, dịka ọmụmaatụ, ga-achọ ka onye nnata gị tinye font ya na sistemụ ha iji hụ ya. Na Illustrator ma ọ bụ Photoshop, ịnwere ike iji Mepụta Outlines iji gbanwee font na vector oyiyi.
In Onye ihe ngosi, ị nwere ike iji Mepụta Outlines iji gbanwee font ka vector oyiyi. Iji mee nke a, jiri ngwá ọrụ Nhọrọ ma họrọ Typedị> Mepụta Ndepụta. I nwekwara ike iji iwu keyboard ahụ Ctrl + Shift + O (Windows) ma ọ bụ Iwu + Mgbanwe + O (Mac).
In Photoshop, pịa aka nri na ederede ederede. Ọnọdụ gị na oke ederede n'ezie ederede ederede (ọ bụghị akara ngosi [T]) wee pịa aka nri. Site Contextual menu, họrọ Gbanwee na Ọdịdị.
Budata Font Di egwu
Ngosipụta: Anyị nyere iwu kaadị azụmahịa site na Moo ma nwee njikọ njikọ anyị n'elu.
Tags: kaadị azụmahịakaadị azụmahịatọghata font ka guputatọghata font ka ọ dịmepụta ihe ederedemepụta ndepụtadjbudata fontdownload font egwufont egwuotú-esi mee ka ọha oyiyiicononye ihe ngosiUgwumoomoo kaadịPhotoshop-emeputaakara ngosi mgbasa ozittfngwa